Izinqolobane Zomkhiqizo - 192.168.8.1
Kufanele kube yinto eyimfihlo, ngokwesibonelo ilostmyvirginity @ 20, kusho ukuthi awusoze wehluleka ukuyikhumbula.
Nikeza ukhiye wokudlula kumzila ozowukhumbula (ukusebenziseka kuqala). Akudingeki ukuthi usho, ungakha ukhiye wokudida onzima onezinhlamvu ezihlukile, izinombolo, isi-Greek kanye ne-latin. Kodwa-ke ekugcineni uzogcina uyifaka kunamathele futhi uyibeke kumzila oshaya injongo.
Igama le-Alter Default Wifi (SSID) ne-Passkey plus inika amandla Ukubethela Kwenethiwekhi
Iseluleko esengeziwe esingeziwe (njengoba singenamthelela ekuphepheni), ukuguqula igama le-Default Wifi (SSID) njengoba kuzozwakala kangcono kwabanye ukuthi bazi ukuthi baxhumeka kuliphi inethiwekhi.
Sesha Amagama Enethiwekhi (SSID), leli igama le-Wi-Fi le-Router. Ngemuva kokubhala igama lenethiwekhi, kufanele uvumele ukubethela kwe-WPA2-PSK ku-router. Leli yizinga lokubethela elinzima kunazo zonke elitholakala kumanethiwekhi asekhaya.
Izigaba Brand Shiya amazwana
By Huawei Ubuchwepheshe be-aerial & algorithm obuqhutshwa yi-5G, ukulandelana kwemikhiqizo ye-Wi-Fi 6 yeHuawei AirEngine kusiza amabhizinisi ukudala amanethiwekhi we-Wi-Fi 6 kususwe izimbobo zokumboza, ukunikela ngezinsizakalo ngaphandle kwesikhathi sokubambezeleka, futhi kungatholi ukulahleka kwepakethe ngenkathi uzula. Lokhu kuvumela izindawo ezahlukahlukene, kanye nesikhumulo sezindiza sedijithali, imfundo yedijithali, utshalomali lwe-omni-channel, uhulumeni ohlakaniphile, ukunakekelwa kwezempilo okuhlakaniphile, nokwenziwa okuhlakaniphile, okuya enkampanini engenantambo ngokuphelele.
IHuawei ingumthengisi ohamba phambili wokusabalalisa imikhiqizo ye-Wi-Fi 6 bese uyifaka ekusetshenzisweni kwebhizinisi. Kuze kube yimanje, ama-Wi-Fi 6 ama-Huawei AirEngine APs asetshenziswe ezindaweni ezi-5 emhlabeni wonke.
Njengomhlinzeki wamathuluzi aphezulu ezokuxhumana ngocingo, uHuawei unikele ngemizila eminingi ye-LTE 4G kubahlinzeki benethiwekhi jikelele. Futhi eziningi zazo zithola ukuma okuhle kumakhasimende okugcina njengokusebenza kwekhwalithi ephezulu nokusebenza okuzinzile. Ngokwesilinganiso sokusebenza kwezindleko eziphezulu, imizila ye-4G engenantambo ye-Huawei ngeSIM khadi ne-Ethernet port iphenduka idume eMiddle East, e-Asia, eYurophu, ezindaweni zaseMelika nase-Afrika. Ama-4G Mobile Huawei Routers athandwa kakhulu ngamakhasimende ngenxa yobungcweti obusezingeni eliphezulu kanye nemiklamo yemfashini enesayizi ephaketheni ongayisebenzisa.
Ngokwandiswa kwamanethiwekhi we-LTE angenantambo, iHuawei ize yanikela ngokwakhiwa kwama-routers ayo e-LTE ukuhlangana nobuchwepheshe beLTE Pro Advanced ngokuhambisana kwamanethiwekhi ahlukile. Futhi izizukulwane zakamuva zama-LTE Huawei routers zijika zikhula kancane kancane ngezinto ezifake imfashini. Okubaluleke kakhulu yi-LTE Huawei Router nge-Ethernet port & i-SIM khadi slot noma izindawo ezishisayo ze-LTE ezinikela ngokusebenza okuthembekile nokuzinzile kwamakhasimende okuphela.
Le ncwadi yesandla ibhekise kumzila we-EchoLife HG520s we-Huawei, isazosebenza kuningi lama-routers we-Huawei ngokuphelele.
Iya kumzila wekheli le-IP ewindini lesiphequluli lakamuva.
Ikheli elijwayelekile lokumiswa lika-router ngu-192.168.1.1.
Chofoza ku-Okuyisisekelo kuphaneli yesandla sobunxele.
Faka ikheli le-Open DNS kumikhakha ye-Primary DNS Server ne-Secondary DNS Server, bese uchofoza inkinobho ethi Thumela.
Mane uqaphele phansi izilungiselelo zamanje ze-DNS ngaphambi kokushintshela ku-Open DNS, uma ufisa ukuvakashela kabusha izilungiselelo ezindala ngasizathu simbe.
Uma usulungiselele izilungiselelo zakho ze-DNS futhi uchofoze inkinobho ethi Hambisa, sikucebisa kakhulu ukuthi usule i-DNS resolutionver hoard & hoard browser hoards ukuqinisekisa ukuthi izilungiselelo zakho zakamuva zokumiswa kwe-DNS ziqala ukusebenza ngokushesha.
Izinyathelo Zomhlahlandlela Wokuhlela
Ngena ngemvume ku-Ukucushwa kwekhasi lewebhu le-Huawei Router ngokurekhoda i-IP elandelayo ebhokisini le-URL: 192.168.100.1. Okuzenzakalelayo kokungena ngemvume:
Ngena ngemvume; telecomadmin
Ukuzulazulela ku-LAN> Ukucushwa kwe-DHCP Kweseva
Ihlola 'Ukunika amandla iseva ye-DHCP eyisisekelo'
Ihlola Ukunika amandla i-DHCP L2 Relay
Finyelela kumaseva we-DNS:
Ukuze ukwazi ukumisa i-router ye-OpenDNS, kuphakanyiswa kakhulu ukuthi uhlanze i-DNS resolutionver hoard nezilondolozi zesiphequluli sewebhu ukuze uqiniseke ukuthi izilungiselelo zakamuva zokumiswa kwe-DNS zisebenza ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, uma unekheli le-IP elisebenzayo vele ufunde le ndatshana ezokuthatha ukuthi ulibuyekeze kanjani njalo ikheli le-IP elisebenzayo.
Ukuvakashela nje: http://www.opendns.com/setupguide/#resultsTest the recent DNS settings.